Google Talk Guru ဆိုပဲ…..
Google Talk Guru အကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါ။ တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. Guru ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ…တော်တော်လည်းတော်ပါတယ်.. Google Talk မှာ guru@googlelabs.com ကို add လိုက်။ ပီးရင် သူကချက်ချင်း accept လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ပီးရင်တော့ မေးချင်တာတွေကိုမေးပေတော့။ အားလုံးတော့ပြန်မဖြေနိုင်ဝူးနော် ။ သူသိတာတွေကိုတော့ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။ သူ့ကိုမေးတဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုတော့ သိထားသင့်တယ်ထင်တယ်ဗျာ။ မဟုတ်ရင် သူကပြန်မဖြေပေးနိုင်ဝူးလေ.။။။။ ကဲ စမ်းမေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်……
အရင်ဆုံး guru@googlelabs.com ကို invite လုပ်လိုက်ပါ။
ပီးရင် စ မေးကြည့်ကြမယ်…….
Sport scores တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် ဥပမာ score liverpool or arsenal စတဲ့ ကိုယ်သိချင်တဲ့အသင်းနာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက် ။ နောက်ဆုံးရလဒ်တွေကိုပြန်ဖြေပေးလိမ့်မယ်…… ။ ညာဘက်ကပုံလေးကတော့ စာလုံးပေါင်းမှားနေရင်လည်းပြန်ပြင်ပေးတယ်ခင်ဗျ။
Weather သိချင်ရင်လည်း အတူတူဘဲ၊ weather Singapore ဆိုပီးရေးထည့်လိုက်…။
Defination လည်းရတယ်နော်…..။၊ define love ဆိုပီးကိုယ်သိချင်တဲ့စာလုံးကို define နောက်ကနေရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပီ….။
Translation လည်းရတယ်…. translate kiss to Spanish ကိုရိုက်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးလိုပြန်ရေးလာမယ်….။
Web result ကို ရှာချင်ရင် web ကိုရှေ့ကခံပီးရိုက်။
Calculate လုပ်ချင်သူများအတွက် Calculator မလိုတော့ဝူး ။ မေးလိုက်ရုံပဲ…..ကဲ….စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်…။
၁၂၄* ၂၃+ ၁၀= ၂၈၆၂ ရလိမ့်မယ်…..။
Currency လည်းပြောင်းပေးနိုင်တယ်… ဥပမာ- 120 KES to USD။
ကဲ….ဒီလောက်ဆို Google Talk Guru အကြောင်းတော်တော်သိလောက်ကြပီချင်ပါတယ်….ဒီထက်ပိုသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာနှိပ်ကြည့်ပေတော့။
အသုံးဝင် Website address Links များ
Online မှာ Video လေးတွေရှယ်ပြီး ငွေရှာရအောင်
Window 8 ကို သုံးရတာ ရှုပ်နေသူများအတွက် Window7စတ...
မိမိ၏ Facebook Chatting History ကို အပြီးအပိုင်ဖျက...
Facebook Online Chatting Status ကို Hide လုပ်ထားချ...
IT နှင့်ပတ်သက်၍လိုချင်တာရှာရန် လင့်များ
Google Talk Guru ဆိုပဲ….. 07Apr<!-- .date --> ...
သင်ဘာလိုသလဲ..စာအုပ်အစုံရပြီ စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတ...